Unyango lokunyanga - umatshini wokufudumeza ngaphakathi | izisombululo zokungenisa ubushushu
Ukukhupha Ukuphulukisa Ukutshiswa kweengubo ze-Organic
Ukutshisa ukunyuka isetyenziselwa ukuphilisa iingubo ezibonakalayo ezifana nokupenda kwiimbane zensimbi ngokuvelisa ukushisa kunye nokukhupha .Kuba oku kuthetha ukuba unyango luvela kwenzeka ngaphakathi ekunciphiseni ukuthambekela kokwakhiwa kweziphene zokumbumba. Eyona ndlela ifake isicelo sokumeka kwepeyinti yetshe.
Ukutshisa ukutshisa kweengxenye zensimbi ukuxhamla ukunyanga ukunyanga Amaqondo okushisa asetyenziswa kwiinkqubo ezininzi zeemoto, ezifana nokusetyenziswa kwamathanga okubamba i-thermosetting ukuvelisa iiplanga ze-clutch, izicathulo zokuqhawula kunye nezixhobo ze-auto bumper. Amashishini afakwa ngokukodwa kwi-rotor cage rotors ekwakhiweni kweenjini ezincinane. Ukukopisha uomatshini, izinto zeplastiki zixhomekeke kwi-rotum rotors; I-glue ye-thermoplastiki isetyenziselwa ukubamba i-foam rollers kwi-shafts zensimbi. Emva kokuba ama-rollers agqitywe, i-shaft iyatshisa kwaye i-foam ishintshiwe.
Modern lokutshisa unokusombulula ezininzi zeengxaki. Ukutshaya ngokutyunjwa kukunika ubushushu obunokwethenjelwa, obunokuphindaphindiweyo, obunxibelelwano namandla obuninzi ngexesha, ukwenzela ukuba inkqubo yokunyanga ingagqitywa ngamandla kunye nexesha elincinci. Ukujikelezwa kwamaqondo okuphucula ukuphucula kunokufezekiswa ngokulawula iikhompyutheni zombuso onamandla. Ukuphelisa amanyathelo angaphezulu okulayisha nokukhupha ii-ovens, izitulo zokushisa izitishi zingabandakanywa kumgca wokuvelisa. Ekugqibeleni, ukufudumala ukutshisa kungenziwa kwiindawo ezicocekileyo kakhulu, iimeko zokungcola okanye imimandla ekhethekileyo, okuvumela izicombululo ezizodwa.
Nangona ukufudumala ukutshisa okuqhelekileyo kusetyenziswa ngeesinyithi okanye ezinye izinto zokuqhuba, iiplastiki kunye nezinye izinto ezingekho mveliso zihlala zifudumala kakhulu ngokusebenzisa i-metalcept susceptor ukuhambisa ukutshisa. Amandla e-RF ayimfuneko ukunyanga ukunyanga Izicelo ziqala ukusuka kwi-4 ukuya kwi-60kW, kuxhomekeke kumalungu kunye neemfuno zesicelo.
iindidi Teknoloji tags ukunyanga ukunyanga, ukutyalwa ukunyusa ukushisa, lokutshisa, Ukutyalwa kweengubo zoMzimba, yembethe